Taangiyada Birta ah ee Brazing leh Kuleylka Kuleylka-HLQ taangiyada biriijka
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka / Taangiyada Birta ah oo Indha indheynaysa
Taangiyada Birta ah ee Xiiranaya Induction
Category: Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka Tags: taangiyada birta ah ee lagu xirayo induction, taangiyada brazing, iibso kululeeyaha taangiyada birta ah, taangiyada gaaska indha indheynta, HF taangiyada biraha, taangiyada birta ah ee indha indheynta, Taangiyada brazing induction, Taangiyada haanta biraha induction, taangiyada saliida indha indheynta, taangiyada birta ah, taangiyada birta kululeeyaha induction
Taangiyada Birta ah ee Xiiranaya Kuleylka Kuleylka
Ujeedada codsigan ayaa ah indha indheynta taangiyada birta ah ee loo yaqaan 'cylindricalal steel' ee loogu talagalay Warshadaha Saliida & Gaaska. Macaamilka, soo saaraha haanta 'propane tank', wuxuu rabaa inuu isticmaalo kuleylka kuleylka si loo hagaajiyo habka wax soo saarka loona kordhiyo waxtarka tamarta adoo badalaya kuleylka foornada.
DW-HF-45 kW nidaamka kuleylka induction ayaa loo adeegsaday codsigan.
Habka Indheynta Induction:
Taangiga birta ah waxaa lagu dhejiyay gudaha qaab loogu talagalay xirmooyinka kuleylka kuleylka. Heerkulka brazing ee la rabay waxaa lagu gaadhay awoodda 40 kW 15 ilbidhiqsi oo gaadhay heerkulka 800 ° C (1472 ° F).
Warshadaha: Warshadaha saliida & gaaska, dhuumaha, maraakiibta, taangiga, kululeeyaha ama shaqooyin kale oo bir ah
Burinta alwaaxda leh alwaaxida